Warsaxaafadeed: R/Wasaare Gaas oo dalka dib ugu soo laabtay. – Radio Daljir
Juunyo 9, 2012 3:42 g 0
Muqdisho, June 8 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.? Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubnihii wefdigiisa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib shir uu kaga qeyb galay dalka turkiga oo ay ka soo qeyb galeen in ka badan 50 dal iyo hay?ado Caalami ah kaa oo lagaga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa waxaa si diiran garoonka Caalamiga ah ee Muqdisho ugu soo dhoweeyey dadweyne aad u fara badan,Qaar ka tirsan golaha Wasiirada, Xildhibaano, Saraakiil, Haween,Barbaarta gaashaaman iyo Fanaaniin.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa warbaahinta uga warbixiyay safarkiisa wuxuuna sheegay in Shirkii labaad ee Istabuul ee dalka turkiga u ka qeyb galay islamarkaana tilaamay in shirkaasi looga hadlayay hormarka dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa dhinaca mashaariicda hormarinta dalka, Isagoona sheegay in shirkaasi uu ku soo dhamaaday si guul ah.
?Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto caasimadii dalka ee Muqdisho, Waxaan ka soo qeyb galay shirkii Istanbuul ee dalka turkiga kaa? oo lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Shirkaasoo ku soo dhamaaday guul islamarkaana shir muhiim ah u ahaa gedi socodka? Nabada Soomaaliyeed ee dowladda Walaalaha nahay ee turkiga inoo qabatay.
Waxaan ka gudbeynaa KM Gaarnimada sidoo kale waxaan ku jirnaa dhameystirkii Dastuurka, Waxaan galeynaa jawi nabadeed marka barnaamijkaas socdo in lagu taageero xukuumadda laguna bixiyo dhaqaale Soomaaliyana mudadii 20-ka sano ee colaada ka jirtay la soo afjaro?.
Ugu dambeyntii Ra?iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in socdaal uu ku soo maray dalka Kenya islamarkaana ay Mas?uuliyiinta dowladda Kenya ay isla afgarteen sidii kor loogu qaadi lahaa? xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya.
Deputy of Communication Director Office of Prime Minister
3 qof oo rayid ah ayaa dhintay tiro kalena waa ay dhaawacmeen kaddib markii ay shufto rasaas ku fureen gawaari inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Cagaaran